Tababaraha Inter Milan ee Antonio Conte ayaa ku qoslay wararka sheegaya in kooxdiisa Nerazzurri ay ka faa’iidaysan doonto Real Madrid oo ay sii diciifiyeen dhaawacyo iyo xanuunka Korona Fayras marka ay habeen dambe ku kulmaan Statio Giuseppe Meazza.
Los Blancos ayay dhaawac kaga maqan yihiin Sergio Ramos, Karim Benzema, Fede Valverde iyo Alvaro Odiriozoa, halka Luka Jovic iyo Eder Militao ay xanuunka Korona Fayras u jiifaan.
Antonio Conte oo ka hadlayey shir jaraa’id ka hor ciyaarta ay ku martigelinayaan Real Madrid ayaa meesha ka saaray inay Real Madrid noqon doonto koox diciif ah, waxaanu hoosta ka xariiqay inay ku talo-geli doonaan koox adag oo u diyaarsan sidii ay guul u gaadhi lahayn.
“Ilama aha in Real Madrid ay noqonayso koox u barooranaysa ciyaartoyda ka maqan.” Ayuu yidhi Antonio Conte oo intaa ku daray: “Waxay haystaan koox ay joogaan ciyaartooyo badan. Xaqiiqadu waxay tahay in wargeysyadu ay ka hadlayaan ciyaartoyda ka maqan Madrid, taasina aniga way iga qoslinaysaa.”
Ciyaartan ayaa Inter Milan u ah qasab-ku-guuleysto, haddii kale waxay si buuxda u macasalaamayn doonaan tartanka Champions League maadaama ay laba dhibcood oo kaliya ka heleen saddexdii ciyaarood ee hore.
Antonio Conte ayaa ogsoon in rajada kooxdoodu ku xidhan tahay guul, waxaanu yidhi: “Anaga final oo kale ayay noo tahay ciyaartani. Waanu garanaynaa taariikhda kooxda, kaliya maaha waqtiyadii tegay balse sidii ay ahaayeen taariikhda dhow.
“Waxaanu ognahay in aanaan haysanin dookhyo badan oo aan ahayn inaanu natiijo muhiim ah keeno. Waxaanu hore u muujinay in haddii aanu si fiican u ciyaarno oo aanu yool lahaano, in aanu ciyaarta ku guuleysan karno.”
axadle 5804 posts